Indlu etofotofo eTarusa ilindele iindwendwe zayo - I-Airbnb
Indlu etofotofo eTarusa ilindele iindwendwe zayo
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguЯна
Indlu yethu esiyithandayo ikwisixeko esihle saseTarusa, ekwikhilomitha eziyi-120 ukusuka eMoscow. Le ndlu ikwindawo ethe cwaka Yendlu Yeholide, phakathi kwemida yesixeko. Kukho isakhiwo esineendawo eziyi-12 ezijikeleze indlu, nemithi nezinto zokuhombisa. Kukho indawo yokoja esesitratweni kunye nendawo yokupaka imoto eyi-1 eyadini. Kukho yonke into yabantwana: isitulo, ibhafu, ibhedi yosana kunye nezinto zokudlala. Kukho umgcini ohlala kwindlu esecaleni komnyango ukuba kukho naziphi na iingxaki ezifana nokucoca iindlela zekhephu okanye ukulungisa into eyenza kufudumale.
Indlu yethu inothando lwendawo esihlala kuyo, kuba iTarusa sisixeko esimangalisayo. Isixeko esikhuthazayo, isixeko samabali. Nokuba incinci kangaka. Yiza ufumane ezona ndawo zimuncis 'iintupha emhlabeni.
1 ibhedi elala abantu ababini, iisofa ezikwazibhedi eziyi-2, \_u00A0Ibhedi yomntwana eyi-1
I-Tarusa sisixeko esidala nesihle kakhulu, esinembali ebangel 'umdla. Iimbongi ezahlukahlukeneyo ezidumileyo, amagcisa kunye nemifanekiso eqingqiweyo yayihlala eTarus. I-Tsvetaeva Marina, ePaustovsky, eRichter, eBella Kaenulina - bonke aba bantu bayithanda kakhulu iTarusa. Le ndlu ikumgama wemizuzu eyi-15 ukusuka kwi-Oka River Valley, kunye neendawo zenkcubeko zesixeko. Kude nendlu kukho iSilver Age Park - kukho iveranda entle yasehlotyeni kunye nevenkile yokutyela, iNdlu yeeNgcaciso - indlu entle enendawo yokungena yasimahla, imiboniso yamagcisa aseItali kunye nezinto zobugcisa, apho kudlalwa khona imiboniso yomculo weklasiki okanye ukudlala ngokudlala. Kukho nevenkile yokutyela yaseItaly enemenyu encinci kodwa efanelekayo kummandla we-DL) kwaye kukho indawo entle ye-Oka kwaye kukho ulwandle olunentlabathi (!) ezantsi kwepaki.
I-Tarusa yaziwa ngokuchitha i-Oka ecaleni kwe-emobankment - unokukhwela isikhephe, isikhephe kunye ne-Thai Jonka. Zonke iindlela zamanzi zikhokelela kwindlu enkulu eyimbali yasePolenovo, indlu yePolenov estate - apho igcisa elidumileyo ehlabathini lonke uPolenov V.D. wayehlala khona waza wasebenza. Le ndawo intle kakhulu kwaye inomoya)
Kholelwa kum, uza kufumana into onokuyenza kwisixeko sethu esisemagqabini!
Umbuki zindwendwe ngu- Яна
Ndihlala ndizama ukuzibulisa ndize ndamkele iindwendwe zam! kodwa ukuba akulungi, kukho umntu ohoyayo kwindlu engummelwane onokunceda iindwendwe zizinze zize zihoye ezobugcisa nezinye iingxaki zasekhaya